पुजारीविनाकाे तीर्थस्थल पुग्दा...
नवराज कुँवर काठमाडाैं, २९ फागुन
बिर्सनै नसक्ने त्यो परिवेश, आज पनि मनसपटलमा ताजै छ । सुन्दर, मनोरम र शान्त त्यो ठाउँमा पुग्दा जोकोहीको मन फुरुङ्ग हुन्छ । यति मात्र कहाँ हो र, जिज्ञासु स्वभावको मान्छेका लागि त्यो ठाउँ आफैँमा एउटा 'विश्वविद्यालय' हो ।
हो, सानो तर शक्तिशाली मुलुक इजरायलको हाइफा शहर वास्तवमै सुन्दर छ । वैज्ञानिक तमार जुरेर नेतृत्वको टोलीमा इजरायलको उत्तरी भेगमा पर्ने यो पहाडी शहरको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । तमार निकै मिलनसार थिइन् । वैज्ञानिक भए पनि उनी एक टिचरजस्तै थिइन्, जो आफ्ना साथीहरूका लागि ‘इन्फरमेटिभ गाइड’को भूमिका निर्वाह गर्नमा पनि कुशल थिइन् । म सन् २०१४ मा हाइफा पुगेको थिएँ । दोस्रो पटक सन् २०१५ को अन्तिममा पुगेँ, जुन बेला म तमारको टोलीमा थिएँ । यो शहर, यहाँका दृश्य, विशेषतालगायतका यावत जानकारी मैले तमारबाटै लिएँ । त्यसबाहेक बहाई गार्डेनका सूचना प्रतिनिधि इचिक एलोनीले मेरा जिज्ञासाहरू मेटाउन सहयोग गरे ।
यो यात्रा अनुभूतिमार्फत मैले थाहा पाएका केही नयाँ जानकारी बाँड्ने प्रयास गरेको छु । मलाई लाग्छ, यहाँ मैले बाँड्न लागेका कतिपय कुरा धेरैका लागि विलकुल नयाँ हुन सक्छन् ।
जब मैले हाइफालाई नजिकबाट नियालेँ, त्यहाँ सबैभन्दा सुन्दर बगैँचा देखेँ । यस्तो बगैँचा जसले संसारका जो कोहीको मन लोभ्याउँछ । भूमध्येसागरको शीर र पहाडको काखमा रहेको हाइफा आफैँमा लोभलाग्दो छ, त्यसमाथि ‘बहाई गार्डेन’, आहा ! यो बहाई धर्मावलम्बीहरूको तीर्थस्थल पनि हो ।
कार्मेल नामको पहाडमा बनाइएको यो शहर निकै प्रिय लाग्छ । त्यहाँ पुग्दा सबैभन्दा पहिला ध्यान तान्ने आकर्षण हो– कार्मेलस्थित एक भव्य र ठूलो बगैँचा बहाई, जुन बगैँचा लगभग पहाडको पूरै उचाइ तय गर्दै शहरका दुई मुख्य सडकको बीचबाट गुज्रिन्छ ! धेरैले यो नाम सुनेकै हुनुपर्छ ।
म आश्चर्यचकित भएँ, इजरायलमा त पहिलेदेखि नै तीन अब्राहमिक धर्म– जुडिज्म, इसाई र मुस्लिम सदियौँदेखि लडिरहेका छन् । यस्तोमा अर्को एउटा धर्मको तीर्थस्थल यहाँ कसरी रहन गयो ?
मेरो यस्तो जिज्ञासा मेटाउन गार्डेनका सूचना प्रतिनिधि इचिक एलोनी थिए । मभित्र उब्जिएका सबै जिज्ञासा उनीतिरै तेर्स्याएँ । कतिपय प्रश्न सुनेपछि हाँस्दै उनले भने, ‘तिमी विशेष रिसर्चमै पो आएका हौ कि !’ ख्यालठट्टामै मैले इचिकबाट धेरै कुरा दुहेँ ।
बहाई धर्म विलकुल नयाँ धर्म हो । यसका संस्थापक पर्शिया (आजको इरान)को कुलीन घरका मिर्जा हुसेन अली थिए, जसलाई उनका अनुयायीले बहाइउल्लाको उपाधि दिएका थिए ।
बहाइउल्ला आफैँ बहाई धर्मका अग्रदूत महात्मा बाबका अनुयायी थिए । बाब इरानमा जन्मिएका अर्का महान् धार्मिक अध्येता थिए, जसले लेखेको धार्मिक ग्रन्थ धर्मको स्थापनामा साध्य बन्यो । बाब ३० वर्षको उमेरमा मारिएका थिए ।
पर्शियाले प्रतिबन्ध लगाएपछि बहाइउल्ला आफ्ना अनुयायीसँग अक्का शहर आए । त्यो समय ओटोमन साम्राज्य थियो । आज इजरायलमा छ । यहाँ आएलगत्तै उनलाई कैद गरिएको थियो तर बिस्तारै उनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नरम पारियो ।
अहिलेसम्म आएका सबै अवतारले बहाइउल्लाह आउने भविष्यवाणी गरेको यो धर्म मान्नेहरूको विश्वास छ । बहाईका अनुयायीहरू बहाउल्लाहलाई यो युगका प्रतीक्षित ईश्वरीय अवतार मान्छन् । उनलाई धरतीमा एकताको स्थापनाका लागि ईश्वरले नियुक्त गरेका अनुयायीहरूको विश्वास छ ।
अब बहाई गार्डेनका बारेमा चर्चा गरौँ, जुन हाइफा शहरको सुन्दरताको सबैभन्दा प्रमुख कारक हो ।
बहाई गार्डेन २ लाख स्क्वायर मीटर जमिनमा फैलिएको रहेछ । स्टेप स्टेपमा रहेको यो बगैँचामा करिब १८ टेरेस छन् ।
शहरका तीन प्रमुख सडक यही बगैँचा हुँदै गुज्रिन्छन् । यद्यपि, बगैँचाको भित्रभित्र फुट ओभरब्रिज बनाइएको छ । बगैँचाको सबैभन्दा माथिल्लो भागबाट सिँढी हुँदै तल शहरसम्म पैदल यात्रा गर्न सकिन्छ । बगैँचाको शीरबाट भूमध्येसागरको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
हाइफा र अक्कामा ‘युगावतार’ बहाउल्लाह र बहाई धर्मका अग्रदूत महात्मा बाबको समाधि देख्न सकिन्छ । हाइफाको डाँडामा रहेको बहाई धर्मको ठूलो र सुन्दर यो बगैँचालाई हेर्नका लागि संसारका विभिन्न देशका मानिस आउने गर्छन् । यो बहाई धर्मको तीर्थस्थल पनि हो । यहाँ संसारका कुनाकुनाबाट बहाई धर्मावलम्बी ‘बहाई’ तीर्थका लागि आउने गर्छन् ।
बगैँचा क्यानेडियन आर्किटेक्टले बनाएका रहेछन् । गार्डेनमा दुई इस्टर्न–वेस्टर्न स्टाइल देख्न सकिन्छ ।
जस्तो कि, मोरका मूर्तिहरू जो इरानी मूलको हो र हाउस अफ जस्टिस जो रोमन स्टाइलमा बनाइएको छ ।
बहाई धर्मको मान्यताअनुसार आध्यात्मिक विकासका लागि ध्यान गर्नु अर्थात् मेडिटेसन निकै जरुरी हुन्छ । त्यसैले चाहे लोटस टेम्पल होस् वा हाइफाको बहाई गार्डेन, दुवै ठाउँमा शान्तसँग बस्नुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । किनकि, जब तपाईं शान्त भएर आफूभित्र हराउनुहुन्छ तब आफ्ना गल्तीहरू पनि महसुस हुन्छन् र आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास हुन्छ । नभए मानिसको जीवन तँ¬–तँ र म–ममै खत्तम हुन्छ ।
इचिकका अनुसार बहाई धर्म र यससम्बन्धी केही जानकारी यस्तो छः
अरबी र पर्शियनबाट आएको ‘बहाई’ शब्दको अर्थ हुन्छ, ‘भव्य’ ।
बहाई धर्मको सुरुवात सन् १८८४ मा भएको थियो ।
आज बहाई धर्मका करिब ५० देखि ७० लाख अनुयायी छन्, जो संसारभरका २ सय १८ देशमा फैलिएका छन् ।
बहाई धर्ममा पूजारी हुँदैनन् । यो धर्मअनुसार हरेक मान्छेले सत्यको खोज आफैँ गर्नुपर्छ ।
बाँकी अद्वैतवादसम्बन्धी धर्मजस्तै यसको पनि मान्यता छ– ईश्वर एक छन् र सबै धर्मको उद्देश्य एउटै हो ।
बहाई धर्ममा सबै मानिसको एकतामा जोड दिइएको छ र खुला रूपमा जातिवाद वा राष्ट्रवादलाई अस्वीकार गरिएको छ ।
यसको मुख्य सिद्धान्तले बहाई धर्मको आधार स्थापित गर्छ, ईश्वरको एकता, धर्मको एकता र मानवको एकता ।
हाइफा भ्रमण अविस्मरणीय रहनुमा यसको सुन्दरतासँगै बहाई धर्म र यससम्बन्धी जानकारी महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
‘के तिमीले मान्ने धर्म र बहाई धर्ममा केही समानता पायौ ?’, तमारले मलाई सोधिन् ।
‘मलाई लाग्छ, सबै धर्मको उद्देश्य एउटै हो– कल्याण’, म यतिमै रोकिएँ ।
यहुदी धर्म मान्ने तमारले शायद कुरा बुझिन् र मुन्टो हल्लाएर समर्थन गरिन् ।
हामीलाई सुनिरहेका इचिकले मुस्कुराउँदै थपे, ‘अवश्य, सबै धर्मको एउटै उद्देश्य हुन्छ कि मानिसहरूबीच कुनै प्रतिस्पर्धा नहोस् । तर, जहाँ पुगेर प्रतिस्पर्धाको भावना पैदा हुन्छ, त्यहीँ धर्मको लक्ष्य पनि समाप्त हुन्छ ।’
हामीले करिब ४ घण्टा त्यहाँ गुजारिसकेका थियौँ । फर्किएर तेल अभिव पुग्नुपर्ने थियो । मन नहुँदानहुँदै त्यो सुन्दर शहर छाडेर हामी इजरायलको औद्योगिक शहर तेल अभिवतिर लाग्यौँ ।
बिदाइ गर्दै इचिकले भने, ‘फेरि आउनुहोला, म तपाईंहरूलाई यही ठाउँमा फेरि देख्न चाहन्छु ।’ उनले हात हल्लाए ।
थाहा छैन, इचिकले कहिले हामीलाई फेरि त्यो शहरमा देख्न पाउँछन् ।
तर, तपाईं इजरायल पुग्नुभयो र हाइफा घुम्न छुटाउनुभयो भने तपाईंको त्यो यात्रा नै अधुरो हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २९, २०७६, ०९:४७:००
अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसा भएकालाई राहत, नेपालीलाई सजिलो हुने